ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ထူထောင်ပြီဟု NUG အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာ …. – Cele Lover
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ထူထောင်ပြီဟု NUG အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာ ….
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ယနေ့စတင်ထူထောင်ပြီဟု တရားဝင်ကြေညာသည်။ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်၏ ရှေ့ပြေးအမြူတေအဖြစ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG အစိုးရ
ကြေညာသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည် တရားဝင် ပြည်သူ့အစိုးရထံမှ နိုင်ငံတော်အာဏာကို အဓမ္မလုယက်ပြီး အစိုးရခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရုံသာမက၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သော ပြည်သူများအား အကြမ်းဖက် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေး
ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ပြည်သူများအပေါ် လေကြောင်းစစ်ဆင်မှု အပါအဝင် အင်အားအလွန်အကျွံအသုံးပြုကာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကဲ့သို့သော စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်ဟု ယနေ့ NUG ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် ပြည်သူလူထု၏ လူသားလုံခြုံရေး၊ လူသားဖြစ်တည်မှုအပေါ် တန်ဖိုးထားလေးစားရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို
ထိပါးနှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည့်အပြင်၊ တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေးဉီးတည်ချက်ဖြစ်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကိုလည်း အဟန့်အတား ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊
ယင်းသို့သော အခြေအနေတွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ပြည်သူများအပေါ် စစ်ကောင်စီ၏ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ စစ်ရေးအရ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုများကို ထိန်းချုပ်အဆုံးသတ်ခြင်းဖြင့် နှစ်ပေါင်း ခုနစ်ဆယ်ကျော် ဖြစ်ပွားနေသော ပြည်တွင်းစစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ ထိရောက်သော လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
လုပ်ဆောင်ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိလာသည်ဟုဆိုသည်။ယင်းအတွက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်၏ ရှေ့ပြေးအမြုေ
တအဖြစ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (People Defence Force) ကို ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်အညီ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက် တွင် တရားဝင် ဖွဲ့စည်းထူထောင်လိုက်သည်ဟုဆိုထားသည်။
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ ထူေထာင္ၿပီဟု NUG အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ….
အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ ယေန႔စတင္ထူေထာင္ၿပီဟု တရားဝင္ေၾကညာသည္။ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္၏ ေရွ႕ေျပးအျမဴေတအျဖစ္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း NUG အစိုးရ
ေၾကညာသည္။အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီသည္ တရားဝင္ ျပည္သူ႔အစိုးရထံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အဓမၼလုယက္ၿပီး အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထား႐ုံသာမက၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန႔္က်င္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအေရး
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္မႈ အပါအဝင္ အင္အားအလြန္အကြၽံအသုံးျပဳကာ တိုက္ခိုက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္ဟု ယေန႔ NUG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လူသားလုံၿခဳံေရး၊ လူသားျဖစ္တည္မႈအေပၚ တန္ဖိုးထားေလးစားေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိသည့္အျပင္၊ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးဉီးတည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း အဟန႔္အတား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊
ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္ေကာင္စီ၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စစ္ေရးအရ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္အဆုံးသတ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ထိေရာက္ေသာ လုံၿခဳံေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိလာသည္ဟုဆိုသည္။ယင္းအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ေရွ႕ေျပးအျမဳေ
တအျဖစ္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (People Defence Force) ကို ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္အညီ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္ တြင္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လိုက္သည္ဟုဆိုထားသည္။
Previous Article နေ့ဘက်တွင် ဟန်ဆောင်ဆန္ဒပြပြီး ညဘက်တွင် KTV မှာ သွားကဲတာကြောင့် အင်းစိန်ထောင်တွင် တစ်ညအိပ် လိုက်ရတဲ့ သံစဉ်မောင်
Next Article တကယ့်အလင်းတန်းကို မရမချင်း နေ့တိုင်းဟာ တော် လှန် ရေးနေ့ပဲဆိုပြီး ခိုင်မာ ပြတ်သား စွာပြောလာတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်